पिडि`त भाउजु भन्छिन् : मलाई आफ्नो श्रीमानले मात्रै हैन रातभरि पालैपालो देवरले…. – Ramailo Sandesh
पिडि`त भाउजु भन्छिन् : मलाई आफ्नो श्रीमानले मात्रै हैन रातभरि पालैपालो देवरले….
प्रश्न: मैले बिहे गरेको केही समय मात्रै भयो र मेरो श्रीमान् र म उनको कान्छो भाइ`सँग बस्छौं। ऊ कतै काम गर्दैन र म उस`लाई मेरो भाइ जस्तै व्यवहार गर्छु।
तर केही दिनदेखि मलाई उनी मप्रति आकर्षित भए`जस्तो लाग्छ । एक पटक उनी र म एउटै खाट`मा सुतिरहेका थियौं, जब मलाई थाहा भयो कि उसले मलाई गल`त ठाउँमा छोयो । ऊ सधैं म`लाई हेर्छ र म जहाँ जान्छु मलाई साथ दिने प्रयास गर्छ।
अब यी सबै कुरा श्रीमान्लाई कसरी भनूँ ? मैले केही समय अघि बिहे गरेको र अहिले उनीसँग खासै मिलनसार सम्बन्ध नरहेको बताएको छु । यदि मैले उसलाई सबै कुरा बताए भने, के उसले मलाई विश्वास गर्न सक्छ?मनो`वैज्ञानिक नयामत बावा भन्छन् कि यो तपाईंको सम्बन्धको एक धेरै महत्त्व`पूर्ण चरण हो जहाँ तपाईं अझै पनि आफ्नो पार्टनर`लाई बुझ्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। तिनीहरू`सँग विश्वास र समझको सम्बन्ध निर्मा`ण गर्नुहोस्।
भाउ`जुको उपस्थि`तिमा तपाई`लाई कस्तो असहज महसुस हुन्छ म बुझ्छु। यो तपाईंको लागि निरन्तर खतरा हो र बेरो`जगार हुनुले चीजहरू`लाई अझ खराब बनाउन सक्छ। जे होस्, तपाईं एक हुनुहुन्छ जो आफ्नो लागि बोल्न सक्नुहुन्छ।
यो अत्याव`श्यक छ कि तपाइँ तपाइँको देवर संग सर्कल बनाउनु पर्छ। तपाईलाई सताउने कुराहरूको बारेमा खुलेर बोल्नु`होस्। यदि उसले तपाईसँग बजार जान जिद्दी गर्छ भने, केवल उसलाई भन्नु`होस् कि तपाई आफै जान सक्नु`हुन्छ र तपाई`लाई यो मनपर्छ। यदि उहाँ कोठामा आउनुभयो र तपाईंको छेउमा ओछ्यानमा बस्नु भयो भने, त्यसपछि मात्र भन्नुहोस् कि तपाईं सहज छैन।
उहाँसँग जति नम्रता`पूर्वक र डराएर कुरा गर्नुहुन्छ, त्यति नै उहाँको साहस बढ्दै जान्छ। बिस्तारै उसको फोहोरी ग`तिविधि पनि बढ्दै जान्छ । त्यसैले धेरै कडा व्यवहार अपनाउनु होला ।
तपाईको सुरक्षा सबै`भन्दा महत्त्व`पूर्ण छ र उसको कार्यहरू अपराधी जस्तो देखिन्छ। जति पटक तपाईंले उसलाई बेवास्ता गर्नु`हुन्छ, त्यति नै उसमा अरू केही गर्ने साहस हुनेछ, र यसले तपाईंमा डर पनि जगाउन सक्छ। कोशिस गर्नु`होस् कि तपाई उहाँसँग कहिल्यै एक्लै नगर्नुहोस् र यदि यस्तो अवस्था आयो भने, स्पीड डायल सूचीमा निश्चित रूपमा आपातकालीन नम्बर राख्नुहोस्।
तिमी भर्खरै बिहे गरि`सकेकी छौ अनि श्रीमान्लाई यी कुराहरु कसरी सुनाउने म तिम्रो चिन्ता बुझ्छु । घरको सदस्य`माथि यति ठूला आरोप लगाउनु ठूलो कुरा हो, तर यो समस्या आफ्नो श्रीमानलाई भन्नु नै राम्रो हुनेछ । तपाईंले तिनीहरू`लाई गलत तरिका भन्नु पर्दैन,
तर तिनीहरू`लाई यसको बारेमा जान`कारी दिनुहोस्। मलाई आशा छ कि तपाईंले तिनीहरू`लाई भन्नको लागि साहस जुटाउन सक्षम हुनु`हुनेछ। सधैं सम्झनु`होस् कि यो तपाईंको गल्ती होइन र तपाईंले यसको लागि आफैलाई दोष दिनु हुँदैन।